काँग्रेस नेताको प्रश्न– दशैं मनाउन कर्मचारीलाई तलव दिन नसक्ने सरकारले के संवृद्धि देला ?| Corporate Nepal
Tuesday, September 29, 2020 | मंगलबार १३ आश्विन, २०७७
कात्तिक ६, २०७५ मंगलबार १८:१७
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता एनपी साउदले वर्तमान सरकार असफल भइसकेकोले गम्भीर जोखिममा रहेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लवमा मंगलबार उनले भने, ‘वर्तमान सरकार आन्तरिक द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा परेको छ । हामीले सरकारको आलोचना गर्नु त धर्म नै हो । तर, नेकपाकै बरिष्ठ नेता, त्यो पनि पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो नेताले सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ । यो सरकार धेरै चल्नुहुँदैन् भनेर भन्नुभएको छ ।’
सरकारले अहिलेसम्म राहतका काम केही पनि गर्न नसकेको साउदले आरोप लगाए । उनले भने, ‘चामल, दाल, तेल, चिनीको मुल्य वृद्धि गरिएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मुल्य उपभोक्ताको ढाड सेक्नेगरि बढाईएको छ । जिम्मेवार मन्त्रीहरु तस्करहरुलाई संरक्षण दिने काम गरिरहेका छन् । चिनीको मुल्यवृद्धि पनि त्यसैको परिणाम हो ।’
सरकारले समृद्धि हाँसिल गर्नु त टाढाको विषय भएको बताउँदै उनले भने, ‘अहिले कर्मचारीको तलब दिन सक्ने अवस्था पनि छैन् । कर्मचारीलाई तलब नदिँदा दशैं मनाउन पाएनन् । आर्थिक विपतको पूर्व संकेत देखा परिसकेको छ । यो ८ महिनामा मुलुकको अर्थतन्त्र सरकारले तहसनहस पारेको छ । समृद्धि र स्थिरतामा सरकार असफल भएको छ ।’
संविधान कार्यान्वयन गर्नपनि सरकार असफल भएको उनले आरोप लगाए । नेता साउदले नेकपाको केन्द्रमा मात्रै नभएर ६ वटै प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा सरकार भएर हालीमुहाली भएपनि जनताले भनेजस्तो काम गर्न नसकेको आरोप लगाए ।
उनले भने, ‘हुँदाहुँदा अब मुख्यमन्त्रीहरुले भेला आयोजना गरेर हामीलाई अधिकार प्रत्यायोजित गरिएन भनेर गुनासो पोखे । यसले संवैधानिक बिशृंखलता उत्पन्न गराउँछ । संविधान र संघीयतालाई नै असफल बनाउने बाटोतर्फ यो सरकार हिँडिरहेको छ ।’
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारले अपराधी पत्ता लगाउन नसकेकोमा आपत्ति जनाउँदै साउदले भने, ‘सारा राज्य लागेको छ, तर अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लगाउन सकेको छैन् । सरकारले केही कर्मचारी र प्रहरी अधिकारीलाई निलम्बित गरेर जनताको मुख्य ध्यान भड्काउन खोज्दैछ । बलात्कारीलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’
उनले नेकपाका साना भुरा कार्यकर्ताहरुले प्रशासन चलाउन खोजेर कर्मचारीतन्त्रको मनोबल खसाईरहेको पनि आरोप लगाए । साउदले भने, ‘सरकार ठिक बाटो (ट्रयाक)मा आओस्, तर सुध्रिने कुनै छाँटकाँट छैन् । यो वाम सरकार होईन, दाम र खाम सरकार हो ।’
तामझामसाथ ल्याइएको रेल अहिले नै थन्कियो
तीन दशकदेखि पश्चिम सेती अलपत्र, स्थानीय निराश
तनहुँ जलविद्युत्को प्रसारणलाइन निर्माण शुरु, भरतपुरसम्म २२० केभी डबल सर्किट निर्माण हुने
भदौ २७, २०७७ शनिबार
अपर बलेफीको सुरुङ खन्ने काम सकियो, माघसम्म विद्युत उत्पादन हुने अनुमान
ओलीलाई बाबुरामको गोलीः बाँडेको भात आँसुले मुछेर खानेहरुको आँसुले तिमीहरुलाई पिर्छ पिर्छ
सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, बजार भाउ तोलाको कति पुग्यो ?
कोरोनाको औषधि तयार , तर प्रयोग गर्ने अनुमति छैन्, यसो भन्छ विभाग
शिखर इन्स्योरेन्सको सीईओमा दीपप्रकाश पाण्डेलाई निरन्तरता
सात स्थानमा कृषि केन्द्र स्थापना गर्न इजरायलले सघाउने
सहकारी जति सफल भयो समाजवाद त्यति दिगो हुन्छः बाँस्कोटा
किलोको रु. ६० मा प्याज पाएपछि थापाथलीमा उपभोक्ताको लाइन, जानकारी भने सीमितलाई